Oppo na-achọ ibido ama ama nwere 5G chipset | Gam akporosis
Oppo bụ ihe dị ka ẹkedori a smartphone na integrated 5G chipset
Enweela ọtụtụ smartphones nwere nkwado maka netwọkụ 5G, yana naanị ihe atụ ole na ole banyere nke a Xiaomi Mix 5G, nke Samsung Galaxy S10 + 5G na ZTE Axon 10 Pro 5G. Agbanyeghị, ndị a enweghị a processor na ntinye 5G modem n’otu aka, ma ọ bụ n’ụzọ dịpụrụ adịpụ.
El Snapdragon 855Dịka ọmụmaatụ, mgbe ọ na-enye nkwado 5G mgbe ejikọtara ya na modụ X50, ọ bụrụ na ịnweghị ya, ọ nwere ike ịhazi akara 2G, 3G na 4G, na mgbakwunye na nhọrọ njikọta ndị ọzọ. Ndị ọrụ dị ka Huawei, Mediatek na Qualcomm nọ na usoro nke ịmalite ndị na-arụ ọrụ na 5G, yana Oppo ga-abụ otu n’ime ụlọ ọrụ izizi ịhapụ ọnụ ya na akụrụngwa a.
Ọ bụ ezie na ọ kpughere aha nke smartphone, ekwentị na ajụjụ a kwenyere na ọ sitere na usoro Oppo Reno ma ọ bụ usoro K, ọ ga-abụkwa onye mbụ n'ime ụwa na-abịa na nke ọhụrụ 5nm Snapdragon 7G integrated chipset.
Ihe ngwugwu Qualcomm Snapdragon 855 nwere nkwado maka modem 5G, mana, dika anyi kwuru, modul a di iche na nhazi. Chipset a na-enye ọtụtụ ọgbara ọhụrụ 5G ntị ugbu a, mana ụlọ ọrụ ahụ ekwupụtala na ụdị chipsets ndị ọzọ ga-enwe modem 5G ndị arụnyere n'ime nhazi ahụ.
OPPO na Realme ga - eji ngosipụta 90 Hz
Ntughari ohuru nke Snapdragon 6xx na Snapdragon 7xx usoro, yana flagship Snapdragon 8xx usoro, ga-abịa na njikọta 5G modem.. Ihe ntanetị Snapdragon 5G niile ga-akwado mpaghara niile dị mkpa na ụyọkọ ugboro ugboro, Qualcomm na-ekwu. Ekwentị ndị na-arụ ọrụ na nke a ga-akwado ụdị atụmatụ 5G zuru oke, gụnyere mmWave na sub-6 GHz ụdịdị dị iche iche, ụdị TDD na FDD, 5G multi-SIM, ịkekọrịta ụdịdị dị iche iche, na standalone (SA) na ụlọ ọrụ ntanetị na-enweghị onwe ha. NSA).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Oppo bụ ihe dị ka ẹkedori a smartphone na integrated 5G chipset
Redmi 8 na 8A ka ndị Thailand mara na NBTC: igba egbe na-eru nso
Obere ndụ bụ ụwa mmekọrịta mmadụ na ụma ị nwere ike ịnwe “obere ndụ” gị na ndị ọrụ ibe gị na ndị enyi gị